I Catalonia ao Espaina
Sainan' i Catalonia
I Catalonia dia vondrom-piarahamonina mizaka tena (espaniôla: Comunidad autónomas) any avaratra atsinanan' i Espaina izay heverina amin' ny fomba ôfisialy ho manana zom-pirenena. Ny renivohiny dia ny tanànan' i Barcelona. Atao hoe Catalunya amin' ny teny katalana, Catalonha amin' ny teny ôksitana, Cataluña amin' ny teny espaniôla, Catalogne amin' ny teny frantsay, ary Catalonia amin' ny teny anglisy.
Fizaràna ara-pitantanana ny tanin' i Catalonia
Voahodidin' ny Comunidad Valenciana any atsimo, i Aragon any andrefana, i Frantsa any avaratra, Andorra any avaratra-andrefana, ary ny Ranomasina Mediteranea any atsinanana. Manamorona an’ i Frantsa ny ampahany betsaka amin’ ny taniny. Mandrakotra velaran-tany 31 950 km2 (6 % amin' ny velaran' i Espaina). Ny fiteny ôfisialy diany fiteny katalana, ny fiteny ôksitana (fitenim-paritra araney any amin' ny Lohasahan' i Aran) ary ny fiteny espaniôla na kastiliana. Tamin'ny taona 2015 dia nisy mponina 7 508 106 (17 % amin' ny vahoaka espaniôla), ka izy no vondrom-piarahamonina faharoa lehibe indrindra ao Espaina taorian' i Andalusia ary fizaràn-tany fahafolo amin' ny ambaratongam-pitantanana voalohany any Eorôpa amin' ny lafin' ny mponina. Izy koa no be mponina indrindra ao amin' ny Tany Katalana (katalana: Països Catalans), vondrona ara-kolontsaina sy fiteny izay mampifandray azy amin' ny Vondrona Valentsiana (Comunidad Valenciana), amin' ny Nosy Baleares, amin' ny Printsipaotean' i Andôra, amin' ny Franja de Aragón ary amin' ny ankamaroan' ny departemanta frantsay ao Pyrénées-Orientales.
I Catalonia dia iray amin' ireo vondrom-piarahamonina mizaka tena (espaniôla: comunidades autónomas) miisa 17 ao Espaina, ary manana ny maha izy azy manokana izay asehon' ny governemantany, ny sainany ary ny fiteniny (fiteny katalana), ankoatry ny singa hafa. Voafehin ’ny sata mifehy ny fizakan-tena izy io. Ny Parlemantan' i Catalonia dia mamaritra an' i Catalonia ho firenena (katalana: nació, espaniôla: nación). Ny Parlemantan' i Catalonia, izay manana ny maro an' isa mitaky fahaleovantena, dia nanambara ny Repoblika Katalana (katalana: República Catalana) tamin' ny 27 Oktobra 20174, nitarika an' i Espaina hampiato vonjimaika ny fahefana rehetra nomena lamina ara-pôlitika ao Catalonia, atao hoe Generalitat de Catalunya (katalana), na Generalitat de Catalonha (ôksitana) na Generalidad de Cataluña (espaniôla), lamina izay ahitana antenimiera (Parlament de Catalunya) sy fiadidian' ny filoha (Presidència de la Generalitat de Catalunya), fiankevitra mpanatanteraka (Consell Executiu na Govern de la Generalitat).
Amin' ny lafiny fitantanana, mizara ho 42 comarques i Catalonia, mivondrona ho faritany (katalana: províncies; espaniôla: provincias) efatra: Barcelona, Girona, Lleida ary Tarragona. Ny tangoron-tanàna lehibe indrindra dia ny an' i Barcelona, ​​​​izay faritra an-tanàn-dehibe faharoa lehibe indrindra any Espaina, eo anilan' i Madrid sy i Tarragona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalonia&oldid=1045404"
Voaova farany tamin'ny 23 Mey 2022 amin'ny 10:36 ity pejy ity.